University of Erlangen Nuremberg - Omumu Abroad na Europe
University of Erlangen Nuremberg Nkọwa
tọrọ ntọala : 1742
Echefukwala atụle University of Erlangen Nuremberg
Idebanye aha na University of Erlangen Nuremberg
University of Erlangen Nuremberg bụ a ọha na eze na-eme nnyocha mahadum n'obodo ndị Erlangen na Nuremberg na Bavaria, Germany. The aha Friedrich-Alexander -abịa site mahadum mbụ nchoputa Friedrich, Margrave nke Brandenburg-Bayreuth, na onye enyemaka Christian Frederick Charles Alexander, Margrave nke Brandenburg-Ansbach.
na Germany, omenala na-emesapụ nkà mahadum adịghị na-emekarị nwere engineering akwụkwọ ma ọ bụ ngalaba. Otú ọ dị, FAU nwere a iche engineering ngalaba.
FAU bụ nke abụọ kasị ukwuu State University dị na steeti Bavaria. ọ nwere 5 ikike iche, 23 Ngalaba / ụlọ akwụkwọ, 30 adakarị ngalaba, 19 kwurula ngalaba, 656 professors, 3,404 òtù nke agụmakwụkwọ mkpara na Olee ihe enyemaka 13,000 ọrụ.
N'oge oyi ọkara afọ agụmakwụkwọ 2014/15 gburugburu 39,085 ụmụ akwụkwọ (na nsonye 3,556 mba ọzọ ụmụ akwụkwọ) debara aha na mahadum na 239 ubi nke ọmụmụ, na banyere 2/3 -amụ na Erlangen campus na ndị fọdụrụ 1/3 na Nuremberg campus. Ndị a ọnụ ọgụgụ na-etinye FAU ke ndepụta nke n'elu- 10 kasị ibu mahadum na Germany.
na 2013, 5251 ụmụ akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ na mahadum na 663 doctorates na 50 post-doctoral adian e debara aha ha n'akwụkwọ. Ọzọkwa, FAU natara 171 nde Euro (2013) mpụga ego n'otu afọ, -eme ka ọ otu ike-atọ ndị ọzọ kwụrụ ụgwọ mahadum na Germany.
na 2006 na 2007, dị ka akụkụ nke mba mma igba, FAU a họọrọ site German Research Foundation dị ka otu nke ndị mmeri na German Universities Excellence Initiative. FAU bụkwa a so DFG (German Research Foundation) na Top Industrial Managers maka Europe na netwọk.
Na Ọmụmụ ọkwa nke World Universities maka afọ 2014, FAU họọrọ abụọ n'etiti German mahadum Engineering / Technology na Computer Sciences ìgwè niile anọ ranking parameters TOP, fun, HiCi na Na-.
Faculty of Humanities, Social Sciences, na Theology
Faculty of Business, Economics, na Iwu
1743 - The University na-tọrọ ntọala site na Margrave Friedrich nke Brandenburg-Bayreuth
The University na Erlangen e guzobere na mmụọ nke na oke mmụta absolutism. The ọrụ nke German mahadum iri na asatọ na narị afọ na-egbo mkpa nke ọtụtụ ndị isi site na-eme ndokwa maka agụmakwụkwọ na ọzụzụ nke obodo-orù aka na aha ndi-isi.
Nke a bụ isi iyi nke mkpali maka Margrave Friedrich nke Brandenburg-Bayreuth onye tọrọ ntọala Friedrichs-Universität ya ihe gbasara onye isi na 1743 site n'enyemaka nke Margravess Wilhelmine na mbụ chancelo nke University, Daniel de Superville.
Ọ na-e-atọ mahadum ndị e hiwere na Franconia, mgbe mahadum nke Altdorf na Würzburg, na dabeere na alaeze ukwu obodo nke Erlangen na mbụ naiti nke ulo mmuta dị Hauptstraße. The ukara mmeghe nke University wee ebe on 4 November 1743, ihe omume nke a na-ka na-eme ememe ncheta kwa-arọ dies academicus.
1769 - The University na-gbasaa site Margrave Alexander
Ya n'oge, na University na Erlangen bụ otu n'ime ndị kasị nta na oru nke ya ụdị. A ngụkọta nke 64 ụmụ akwụkwọ e debara na ọhụrụ University n'afọ nke ntọala ya na e ziri site 16 professors; nkezi ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ nọrọ na gburugburu 200 ruo oge ụfọdụ.
Ole na ole mbụ ọtụtụ iri afọ nke University ịdị adị na-akara nsogbu akụ na ụba ebe margraviate nke Brandenburg-Bayreuth bụ dịtụ obere na ọ bụghị karịsịa ọgaranya. Ọ bụghị ruo mgbe 1769, mgbe Bayreuth akara nwụrụ si na margraviate nke Brandenburg-Bayreuth e n'otu na nke Brandenburg-Ansbach, na Friedrichs-Universität e nyere a ọzọ siri ike ego ndabere. Na nsọpụrụ nke Margrave Alexander, ọhụrụ onye na-achị, onye bụkwa ịghọ University mbụ oké nchebe, na University e renamed Friedrich-Alexander-Universität n'otu afọ.
The omenala nso nke ọzụzụ a kụziiri n'ime ezi ikike iche nke Theology, iwu, Medicine na Philosophy. E wezụga Hohenzollern n'obí nke, ka obibi na dowager, naanị egwuri a keokere ọha ọrụ, obere margravial obodo nke Erlangen enweghị mkpa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, aku ma ọ bụ omenala oru, na University nke professors ugbu a enwetawo ihe ọnọdụ n'ime obodo ọha mmadụ.
1810 - Franconia na-aghọ akụkụ nke Bavaria
Afọ iri ise mgbe ntọala ya, na University wara isi mgbanwe dị ka a N'ihi nke na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọgba aghara. Nyefe nke ike ka Prussian okpueze 1792, na French alaeze na 1806 na n'ikpeazụ na Bavarian okpueze 1810 gbanwee margravial University n'ime a ala-agba ọsọ alụmdi. Ezie na nke a pụtara na ọ furu efu ukwuu nke obodo kwụụrụ, dị ka ya ikike na ihe ùgwù pụrụ iche nyere mahadum amaala, ọ na-mma University nke ego.
The ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ ahụ bilitere na nọgidere otu ebe na gburugburu 400 n'oge a. The atụmatụ iwete n'etiti mahadum na Mahadum nke Landshut, tọrọ ala site na Bavarian Minister nke State, Maximilian Joseph Montgelas, pụtara na mmalite nke iri na asatọ na narị afọ ga-eme n'ọdịnihu nke University e mebiri na karịrị otu oge. Ọ ji ya lanarị n'ikpeazụ eziokwu na o nwere naanị ngalaba nke Protestant nkà mmụta okpukpe na Bavaria. Ama a bụghị gara, niile Bavarian ụmụ akwụkwọ nke Protestant nkà mmụta okpukpe, bụ ndị ọnụ ọgụgụ toro budata dị ka a n'ihi nke Franconia na-adịbeghị anya mwekota n'ime Bavaria, ga a manyere na-amụ n'èzí Bavaria.
1818 - The Schloss na-eze inye University
na 1818, na University enwetara a dị ịrịba ama ọtụtụ ụlọ ọhụrụ. Mgbe ọnwụ nke Sophie Caroline, na nwunye nke abụọ nke nchoputa nke University, onye biri na Erlangen dị ka ya dowager kemgbe 1764, King Maximilian m Joseph nke Bavaria nyere Schloss, na Schlossgarten, na orangery na ụlọ ndị ọzọ na mbụ ekesịpde site na margraves na University.
Nkera nke mbụ nke iri na itoolu na narị afọ na-hụrụ Wilhelm von Humboldt bụ isi na mgbanwe nke echiche nke mahadum, na nke ọ kwadoro Nchikota nke nnyocha na ozizi. Nkuzi nke mbụ lekwasị a nditịm exegetic obibia ọkọlọtọ ọrụ ugbu a lekwasịrị anya ụkpụrụ nke agụmakwụkwọ ọmụmụ na nduzi kwupụta onwe ha research.
1824 - Erlangen University Hospital na-tọrọ ntọala
The ewu nke University Hospital Erlangen, ụlọ ọgwụ dị n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Schlossgarten, e mbụ isi ụlọ oru ngo na-eme site na University na e dechara na 1824. Ngwa mmepe kwupụta na-eto eto iche n'etiti achị, na nchọpụta ọhụrụ ebe na nkà ọgwụ na sayensị na nkera nke abụọ nke iri na itoolu na narị afọ necessitated ndị na-ewu nke ọtụtụ ụlọ ọhụrụ gburugburu Schlossgarten na, tinyere Universitätsstraße, nke bịara na-etolite isi nke University. Ndị kasị dị ịrịba ụlọ si oge a bụ Kollegienhaus (1889), mmewere ahụ na daa ọrịa ụlọ (1897 na 1906) na University Library (1913).
1890 - The University nwere nkezi nke otu puku ụmụ akwụkwọ
The mgbasa na size wee aka na aka na ndị e kere eke nke ọtụtụ ọhụrụ ngalaba na institutes n'ime ha nke, dị ka iche si ngalaba, ọ kụziri agụmakwụkwọ ọzụzụ ma-arụkwa onwe ha research. Student nọmba nwekwara ụba ịrịba na nkera nke abụọ nke iri na itoolu na narị afọ. N'oge okpomọkụ ọkara afọ agụmakwụkwọ 1890, na ọnụ ọgụgụ nke ụmụ akwụkwọ debara aha topped 1000 akara maka oge mbụ,
nke pụtara na University họọrọ nọmba 15 n'etiti 21 mahadum na German Alaeze Ukwu na okwu nke size. Nke a na mmepe na-gbanwere mmekọrịta dị n'etiti University na obodo. Ebe Erlangen mbiet na iri na asatọ na narị afọ e kpebisiri ike site Huguenot trades na crafts, na iri na itoolu na narị afọ ndị University malitere ịkụ ihe na-esiwanye ịrịba ama ọrụ.
Otu n'ime ihe ndị kasị ama professors bụ onye kụziiri na Mahadum bụ ọkà mmụta okpukpe Adolf von Harleß, ọkàiwu Christian nke obi ụtọ, prọfesọ nke nkà mmụta ọgwụ Franz Penzoldt, ndị ọkọ akụkọ ihe mere Karl Hegel, ọkà ihe ọmụma Ludwig Feuerbach, prọfesọ nke German Benno von Wiese, prọfesọ nke Oriental ọmụmụ na-ede uri Friedrich Rückert, na mgbakọ na mwepụ Max Noether, na physics Eilhard Wiedemann, na chemists Emil na Otto Fischer, ndị ọkà Johann Christian Daniel Schreber, na pharmacists Theodor na Ernst Martius, na zoologist Enoch Zander, na geologist Bruno von Freyberg.
Ụfọdụ n'ime Erlangen 's ama ụmụ akwụkwọ na-agụnye theologist Wilhelm Löhe, ọkàiwu na Prussian statesman Karl Freiherr von Stein na Old Stone, dọkịta Samuel Hahnemann, ndị na-ede Heinrich Wackenroder, Ludwig Tieck, Daniel Schubart na August Graf von Platen, na mmiri ọgwụ Justus von Liebig, na physics Georg Simon Ohm na mgbakọ na mwepụ Emmi Noether.
1920 - The Pro-Rector na-aghọ ndị Rector
Ntiwapụ nke Agha Ụwa Mbụ na 1914 nwere a bukwanu utịp ke University. Ke ata akpa usen nchikota ndi mmadu di, na Kollegienhaus , na Schloss na ọtụtụ ngalaba na Universitätsklinikum Erlangen a tọghatara ụlọ ọgwụ unan. Around atọ n'ụzọ anọ nke ụmụ akwụkwọ ahụ na-emetụta conscription ma ọ bụ afọ ofufo aha. Nke a mere ka nnukwu dobe na ọnụ ọgụgụ ndị ụmụ akwụkwọ ndị nọ na-amụ ihe. N'oge agha afọ e nwere ndị na-emekarị nanị banyere 300 ụmụ akwụkwọ na-ewetara na Erlangen.
Ihe ndị mere Bavarian mgbanwe nke 1918 na 1919 na ụdi abolition nke ọchịchị ndị eze pụtara na aha 'Rector Magnificentissimus' nke mbụ a mụrụ site na-achị achị eze ugbu a okụrede. The ụlọ ọrụ nke Pro-Rector e mere gbanwere 'Rector (Magnificus)'na 1920. N'otu aka ahụ, okwu 'na Pro-Rector' dochie gara aga aha 'Exprorektor'. N'ihi na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ, afọ ozugbo Agha Ụwa Mbụ na akara nke ịda ogbenye na ọtụtụ ụmụ akwụkwọ si ogbenye iche bịara University na olileanya nke ewu ọhụrụ futures onwe ha n'agbanyeghị na ha umeala akwụkwọ.
Onu oriri na odida nke ọtụtụ mfọn òtù kwukwara ka ha na ọnọdụ. The Student Representatives Committee E hiwere na 1919 na sochiri na 1922 site bụ ugbu a Studentenwerk (Mmụta Ọrụ) nke, na 1930, meghere Studentenhaus nke ka na-anọchi na Langemarktplatz taa. Na mkpokọta, Otú ọ dị, mgbe ya-eto ngwa ngwa na n'etiti nke iri na itoolu na narị afọ, 1920s ndị a oge nke ọnọdụ na-achọghị maka University.
1928 - The Faculty of Sciences na-tọrọ ntọala
The amụba mkpa nke eke sayensị na ghọrọ nnọọ ìhè na nkera nke abụọ nke iri na itoolu na narị afọ mere ka a mgbanwe ke University si Ọdịdị. na 1928, eke sayensị ndị e kewapụrụ anya ihe ahụ ngalaba nke Humanities na Social Sciences na nyere ngalaba ọnọdụ nke ha onwe ha.
1933 - The University nke obodo kwụụrụ dara anụ ka National Socialism
A mba idụhe nke uche ama n'ụzọ doro anya na-egosi na University na Erlangen n'oge Weimar Republic, na na November 1929, ndị German National Socialist Student Association nweela onye zuru ọtụtụ ná ndị oche ke Student Representatives Committee ntuli aka nke mbụ mgbe ọ bụla German mahadum. N'oge afọ nke Nazi ọchịchị aka ike, Erlangen e chebere ọ bụla nke ihe ndị na-erukwa na ndị ọzọ na mahadum, dị ka mgbasa nke professors ekweghị ụkwụ otu akara, akwụkwọ ọkụ nke May 1933, ma ọ bụ na Nsonye nke na-achị na kwekọọ ka echiche ndị Nazi, dị ka 'mba nnyocha'.
The University nke agụmakwụkwọ obodo kwụụrụ e wepụrụ n'oge ọchịchị Nazi na Onye Ndú ụkpụrụ na-etinyere na mahadum n'usoro ochichi, dị ka ndị Rector ọ dịghịzi họpụtara ndị professorial ahụ ma a họpụtara site Reichsminister nke agụmakwụkwọ omume. Dị ka o mere na mahadum gafee Germany n'oge a, na-amụrụ nọmba Erlangen ama esịn ukwuu dị ka a n'ihi nke Nazi izi iwu.
1945 - The University dabara nwughari
Site na njedebe nke Agha Ụwa nke Abụọ, Erlangen bụ nanị mahadum obodo Germany, ndị ọzọ karịa Heidelberg, nke fọrọ nke nta kpamkpam ọkọbọhọ. Students agbakọtalarị University mgbe ozizi maliteghachiri oyi ọkara afọ agụmakwụkwọ 1945/46, na e nwere ndị ugboro ise ka ọtụtụ ụmụ akwụkwọ dị ka tupu agha. Ebe ke ndaeyo ọkara afọ agụmakwụkwọ 1927 e nwere 1340 ụmụ akwụkwọ na afọ iri gachara e nwere 967, n'oge okpomọkụ ọkara afọ agụmakwụkwọ 1947, na University nwere 5316 ụmụ akwụkwọ.
Otú ọ dị, dị ka ndị ọzọ German mahadum nwayọọ nwayọọ kpọliteghachiri ibo ụzọ ha, nọmba na Erlangen malitere idebe ọzọ kwupụta ọgwụgwụ nke 1950s, nke mere na site na oyi na ọkara afọ agụmakwụkwọ 1956/57, Erlangen bụ ndị kasị nta na mahadum na West Germany.
The University ugbu a dị mkpa iji na-enye-ezuru ụlọ ọhụrụ ruo n'ụlọ ya nile ngalaba na institutes. Ná mgbalị iji chebe University uma na ya onye ụlọ clustered ọnụ n'etiti obodo, na ụlọ ọhụrụ na-adịghị wuru na a campus saịtị kewapụrụ na etiti obodo, dị ka ọ dị n'ebe ndị ọzọ, ma e kama wuru na a dịgasị iche iche nke etiti saịtị nke mbụ na-eje ozi ọzọ na nzube.
Nke a bụ ihe mere ochie dịrị Bismarckstraße, ebe a ọhụrụ mgbagwoju maka iwu, nkà mmụta okpukpe, Humanities na-elekọta mmadụ na sayensị e kpughere na 1953. Ọzọkwa ụlọ ọhụrụ soro na etiti obodo, akpan akpan maka Faculty of Medicine, dị ka Department of Neurosurgery na 1978, nke e wuru na Schwabachanlage ebe mbụ psychiatric ọgwụ guzoro n'etiti.
The kasị dị ịrịba ama mgbasawanye nke a na-University na 1960 bụ na ubi nke engineering. The post-agha mkpa ime nke ugbua bụrụhaala na kwalite tinye a ngalaba nke injinịa, a chọrọ ka e kwuru na dị ka n'oge dị 1903. Na mkpara na Faculty of Sciences ugbu a gosiri na ọ dị mkpa maka otu nọọrọ onwe ha ngalaba maka eletriki na n'ibu injinịa, nke e nyere nkwado nke okenye na 1957.
1961 - The Faculty of Business, Economics na Social Sciences na-tọrọ ntọala
Obere oge ndị a ose, na University gbasaa ke a dị iche iche ntụziaka site n'itinyekwu na municipally-kwụrụ ụgwọ mahadum nke azụmahịa, akụnụba na-elekọta mmadụ na sayensị na Nuremberg, hiwere na 1919, n'ime University na-etolite ihe ahụ na ya nke isii ngalaba. Site na mgbe ahụ na University nakweere aha n'okpuru nke ọ na-maara taa, University of Erlangen-Nuremberg.
Ozizi nke akụnụba na nchịkwa azụmahịa, nke nwere ruo mgbe a na-egwuri na a obere ọrụ n'ebe bụ ngalaba nke Humanities na Social Sciences na Erlangen, nwere ike ugbu a ga-rụrụ na a n'ọtụtụ ka nnọọ ukwuu na ya na saịtị na Nuremberg. Nke a amalgamation accelerated uto na-amụrụ nọmba nke ruru a ọgụgụ ọhụrụ kasị elu na njedebe nke 1960.
1966 - The Faculty of Engineering na-tọrọ ntọala
na 1962, mgbe ogologo arụmụka, na Bavarian nzuko omeiwu akpatre kpebiri igosi a Faculty of Engineering na Erlangen. Na nke a, na University meriri megide obodo Nuremberg nke e na-arịọ na a oru mahadum guzosie ike Nuremberg ruo ọtụtụ iri afọ.
Ebe ọ bụ na irutụrụ ebe nke ewu ala achọrọ maka nke a oru ngo na-abụghị dị na etiti nke Erlangen, ntọala maka a ọhụrụ mahadum campus na-tọgbọrọ ndịda ọwụwa anyanwụ nke obodo 1964. Anụmanụ na oruru nke ngalaba nke Engineering, nke ghọrọ nke asaa ngalaba na FAU n'oge, mere na 1966. N'oge a, na University bụ naanị alụmdi na Germany na a ngalaba nke injinịa nke e ike n'ime ẹdude owuwu nke a oge gboo research mahadum na melite dị ka ihe kwurula mahadum.
1968 - The na-amụrụ ije amalite
na FAU, dị ka n'ebe ndị ọzọ, ndị na-esonụ afọ na-adịkwaghị na-amụrụ ije, a ije nke bụ inwe ndị dị otú ahụ na-adịgide adịgide na mmetụta na-agụmakwụkwọ ndụ. The amụrụ ngagharị iwe, nke na-emetụta mahadum nile Germany, bu ibido a nzaghachi mbipụta nke di kpere mahadum metụtara, dị ka ogbenye ọmụmụ ọnọdụ. na 1969, na-amụrụ ije toro ọzọ buu na ghọrọ ngwá mmegide na ndọrọ ndọrọ ọchịchị usoro n'ozuzu. Na imekọ ihe ọnụ ndị ọzọ na-elekọta mmadụ dị iche iche, a na-eto n'ime ihe bịara mara dị ka mmezi-Omeiwu mmegide ije.
E nwekwara oké esemokwu, karịsịa na arụmụka n'elu Bavarian Higher Education Act of 1974, ngalaba nke nke iwu na-amụrụ ndị nnọchianya si na-egosipụta a n'ozuzu na ndọrọ ndọrọ ọchịchị iwu, na n'elu German Higher Education Act of 1976. Ndị a afọ mekwara ka ọtụtụ mgbanwe na University ihu ọha image, dị ka ọtụtụ ogologo-guzobere omenala ndị kagburu. E njedebe professors yi gowns na, na 1968, na ememe nke malitere Ụbọchị, na 'dies academicus', nke ruo mgbe ahụ, e kwuwo na Baroque ịma mma nke Redoutensaal, a kpọfere kama obere flamboyant ambience nke Mgbakọ Maximus ebe ka o mere kemgbe.
1972 - The Faculty of Education na-tọrọ ntọala
The Faculty of Education e guzobere 1972, ịghọ University nke asatọ ngalaba n'oge. Ọ na-eto nke Institute maka Ozizi Ọzụzụ nke e guzobere 1956 na mgbe e mesịrị kwalite na 1958 ịghọ College of Education Nuremberg, a nkụzi ọzụzụ na mahadum, tupu ha aghọọ a ngalaba na FAU. site 2007, na University nwere 11 ikike iche, dị ka ngalaba nke Humanities na Social Sciences e kewara abụọ nọọrọ onwe ha n'ahụ na ngalaba nke Sciences e wusiri n'ime atọ ndị ọzọ.
FAU ruru a ọhụrụ ịrịba ama oyi ọkara afọ agụmakwụkwọ 1991/92 mgbe ole, n'ihi na oge mbụ, ya nwere ihe karịrị 30,000 ụmụ akwụkwọ. Ruo etiti nke iri na itoolu na narị afọ, gburugburu 40 percent nke ụmụ akwụkwọ E debara aha ndị ezi ikike iche nke Theology na Iwu, ma malite na nkera nke abụọ nke iri na abụọ na narị afọ a ọgụgụ buru ibu nke na-amụrụ bi a dọtara n'ebe ndị ọhụrụ ọzụzụ nke injinịa na nke nchịkwa azụmahịa, akụnụba na-elekọta mmadụ na sayensị.
2000 - New mgbanwe-ebe
Ná mmalite nke iri abụọ na narị afọ mbụ, University of Erlangen-Nuremberg na-eche ịma aka ndị ọhụrụ. The ndọtị nke ụlọ na Südgelände (ndịda campus) na erection nke ụlọ ọhụrụ na etiti obodo na-ugbu a na-agbanwe agbanwe ọdịdị nke University. na 2000, na Nikolaus Fiebiger Center nke molekụla Medicine na Glückstraße dochie mbụ physics ụlọ ahụ ma na 2001 hụrụ na oghere nke ọhụrụ Röthelheim Campus na saịtị nke ochie ogbunigwe n'ogige. Akụkụ nke mbụ nke ewu maka ọhụrụ na-abụghị nke ogwugwo center malitere na 2002.
The University bụ ngwa mejuputa Changeover ọhụrụ Bachelor na nna ukwu nke degrees dị ka kenyere na Bavarian State Ministry of Sciences, Research na Arts, na ndị a ogo omume dochie mbụ Diplom na Magister omume site na njedebe nke afọ iri.
Ọzọkwa, iji idowe ihe asọmpi ọnọdụ na mba ọnụ ọgụgụ na izute ịma aka nke ga-eme n'ọdịnihu, Sineti tozuru oke na 7 February 2007 na-ebu a mbara mgbanwe nke University nke Ọdịdị. Ntem, na oyi ọkara afọ agụmakwụkwọ 2007/08, iri na otu ikike e reorganized n'ime ise ezi ikike iche nke ndị University nwere taa. Ndị a ikike na-sub-ekewa ngalaba na esịtidem owuwu bụ ndị e mere iji mee ka ẹdude collaborations na ike ohere ndị ọhụrụ.
Ị chọrọ atụle University of Erlangen Nuremberg ? ajụjụ ọ bụla, comments ma ọ bụ reviews
University of Erlangen Nuremberg na Map
photos: University of Erlangen Nuremberg ukara Facebook
Jikọọ na-atụle nke University of Erlangen Nuremberg.